When you go home, Tell them of us, and say: For their tomorrow, We gave our today | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Dictator Ne Win threatening the people in 1988 with the shoot to kill policy of Burmese Military
Origin of Myanmar language »
“When you go home Tell them of us, and say, For their tomorrow We gave our today”Kohima Epitaph
Tags: British Indian Army, Burma, Cemetery, Imperial Japanese Army, Imphal, India, Kohima, Malaysia, Myanmar, Nepal, Singapore, United States, World War II
This entry was posted on February 25, 2012 at 11:18 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “When you go home, Tell them of us, and say: For their tomorrow, We gave our today”
Defeat Into Victory « Themself Says:
[…] When you go home, Tell them of us, and say: For their tomorrow, We gave our today (drkokogyi.wordpress.com) « Folklore of Discworld | […]
I recently obtained my uncle’s b&w negatives from while he was stationed in India in 1945. There is one ofanew cemetery along the Ledo Road filled with white crosses. The photo was clear enough, that doingasearch of names and serial #’s, I was able to identify it as Kohima. Thanks for your photos.
September 28, 2012 at 9:47 pm | Reply
Except for the initial lines all appear well. kohima war cemetery is in kohima, the capital of Nagaland state, and not in Imphal which is the capital of Manipur state. The states of Manipur and Nagaland are immediate neighbours. Imphal hasasimilar WW II cemetery but smaller in size and interestingly shares the same epitaph.
February 22, 2016 at 6:27 am | Reply
အောင်ဆန်းသူရိယဘွဲ့ရ ဂေါ်ရခါးလူမျိုး စွပ်ဗဟာဒူးရိုင်း
သူ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိတို့သည် မြန်မာတင်မက ကမ္ဘာမှာပါ စံတင်လောက်ပေသည်။
စွပ်ဗဟာဒူးရိုင်းဟုဆိုသည်နှင့် ရန်သူတစ်ရာကျော် အလောင်းများ၏အလယ်တွင် ဘရင်းဂန်းကိုင်ပြီးကျဆုံးနေသည့် စစ်သူကြီး တစ် ဦးအဖြစ်သာမြင်ယောင်မိပါတော့သည်။
အမှန်စင်စစ်တော့သူသည် စစ်သူကြီးတဦးမဟုတ်ခဲ့သလို အရာရှိ
တစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ သာမာန်ရဲဘော်လေး တစ်ယောက်သာ။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၁၉၅၀ ခု ဇွန် ၁၇၊၁၈ ရက်တို့တွင် အမှတ်(၄)ခြေလျင် တပ်ရင်း၏ (ဃ) တပ်ခွဲ သည် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တာလေမှ ပန်ခီသို့ချီတက်စဉ် အင်အားအဆ မတန်များပြားသော ရန်သူတရုတ်ဖြူ သောင်းကျန်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ရန်သူမှ အလစ်အငိုက် ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက် မိမိတပ်မှပါလာသည့် စစ်ကားခုနှစ် စီးပေါ်ရှိ စစ်သည်အားလုံးနီးပါး ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်၊ ထိုအခြေအနေဝယ် အသက်ရှင်ကျန်သူတဦးမှာ စွတ်ဗဟာဒူးရိုင်းပင်ဖြစ်လေတော့သည်။
သူသာကျဆုံးခဲ့ပါလျှင် တပ်မတော်ပိုင်ရိက္ခာ၊ယာဉ်၊လက်နက်များအားလုံး ရန်သူ့ လက်အတွင်းသို့ ကျရောက်မည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်။
အင်အားခြင်းမမျှသည့် ရန်သူအား ပြန်တိုက်ခိုက်လျှင်လည်း နိုင်ရန် ရာခိုင်နှုန်း နည်းလွန်းလှသည်။ ထွက်ပြေးလျှင် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်နိုင်သော်ငြားလည်း သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်က ပြတ်သားလွန်းလှသည်။
သူသေမှ တပ်ပိုင် ယာဉ်၊ ရိက္ခာ၊ လက်နက်များကို ရန်သူတို့ ရစေ့မည်ဟု သန္နိဌာန်ချကာ ကားပေါ်တွင် ပါလာသောသေနတ်များကို အောက်သို့ ဆွဲချသည်။ ပြီးနောက် ထို သေနတ်များကို ရင်ဘောင် တန်းဖြန့်ခင်းပြီးနောက် ဆက်သွယ်ရေးစက်ဖြင့် နောက်တန်းသို့ အကြောင်းကြားသည် ။ ပြီးသည်နှင့် သေနတ်များဖြန့်ခင်းထား
ရာနေရာ၏ တဖက်ထိပ်မှစပြီး သေနတ်ကိုပစ်လေတော့သည်။ သေနတ်ပစ်နေရင်းမှလည်း သူ၏နှုတ်မှ…..
” ဘယ်ဘက်ကပစ်ဟေ့” ဟု အော်ဟစ်ကာ ညာဘက်သို့ ပြေးပြန်သည်။ ထို့နောက် ညာဘက်သို့ ပြေးပြန်ကာ ” ညာဘက်ကပစ်ဟေ့” ဟူ၍ ထပ်မံအော်ဟစ်ပြီး အလယ်မှ လက်ပစ်ဗုံးထပ်ပစ်လေသည်။
” မြန်မာ့တပ်မတော်ကွ မင်းတို့ လူအင်အားလောက်တော့မမှုဘူး”
သူတစ်ဦးတည်း တောင်ပြေးလိုက် ပစ်လိုက်၊ အော်လိုက်၊ မြောက် ပြေးလိုက် ပစ်လိုက်အော်လိုက်လုပ်ကာ တဖက်ရန်သူတပ်များ
အား မိမိတို့ထံတွင် ရန်သူအား ခုခံတိုက်ခိုက်ရန် အင်အားရှိနေသေးဟန်ဖြင့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရပါ စစ်ကစားခဲ့လေသည်။
ရန်သူတပ်များသည်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ အင်အားအမြောက်အများ ကျန်ရှိနေသေးသည်ဟု မှတ်ထင်ကာ အနီးကပ်ချေမှုန်းရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေ။ စွတ်ဗဟာဒူးရိုင်းသည် မမောနိုင်မပန်းနိုင် ပစ်လိုက်အော်လိုက်ပြုရင်းဖြင့် တဖက်ရန်သူများအား ဆက်လက်ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်နေခဲ့လေသည်။
ရန်သူမှာလည်း စွတ်ဗဟာဒူးရိုင်းအား တက်ရောက်ချေမှုန်းနိုင်ရန် ရဲစွမ်းသတ္တိမရှိလေသောကြောင့် အကျဆုံးများနေချိန်ဝယ် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်ကူများရောက်လာခဲ့ ပါတော့သည်။
သို့သော် တပ်သားစွတ်ဗဟာဒူးရိုင်းကတော့ ရန်သူတစ်ရာကျော် အလောင်းများ၏ အရှေ့တွင် ဘရင်းဂန်းသေနတ်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ပိုက်လျက် ထရပ်ကားကိုမှီရင်း ကျဆုံးနေခဲ့ပါပြီ။
ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ၀၁၉၁၄၊ ကျဆုံးရဲဘော် ဆပ်ဘဟား ဒူရွိုင်းသည် ကျဆုံးချိန်ထိ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဧည့်နိုင်ငံသား ကဒ်ပြား သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားကဒ်ပြားသော် လည်းကောင်း မပိုင်ဆိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း တပ်မတော်မှတ်တမ်းဌာနမှ မှတ်ချက်ရေးထိုး ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ထိုကြောင့် တပ်တွင်း အစိုးရပညာသင်ဌါနမှ တပ်မတော်အတွင်း ပညာဆက်လက် သင်ကြားဆဲ ဆဋ္ဌမတန်း (ခြောက်တန်းကျောင်းသား) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားကဒ်ပြား ရရှိရန် လျှောက်ထားဆဲဖြင့်လည်းကောင်း ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
တပ်မှူးကြီးများညီလာခံနှင့် တပ်မတော် မှတ်တမ်းဌာနတို့က သုံးပါတီတပ်ပေါင်းစု သိမ်းယူထားသောမဲနယ်တောင်ပေါ်သို့ ကွန်မန်ဒို ခုနှစ်ယောက်၊ အထမ်းသမား ငါးယောက်တို့ဖြင့် တက်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော စစ်ဝန်ထမ်းတပ်မှ ဗိုလ်မှူးရဲချစ်အား ပထမဆုံးချီးမြှင့်ခဲ့သော သီဟသူရဘွဲ့တံဆိပ်သာ ရဲဘော်ဆပ်ဘဟားဒူးရွိုင်းအား အပ်နှင်းရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး မန်းဝင်းမောင်ထံ တင်ပြခဲ့ကြသည်။
ထိုအချိန်မတိုင်မီက နိုင်ငံတော်တွင် သီဟသူရဆုတံဆိပ်သည် အမြင့်မားဆုံး တံဆိပ် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး မန်းဝင်းမောင်သည် တင်ပြချက်များကိုပယ်ချ၍ နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားသော်လည်းကောင်း၊ ဧည့်နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားသော်လည်းကောင်း မပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့် ကျဆုံးရဲဘော် ဆပ်ဘဟားဒူးရွိုင်းအား နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်မား
ဆုံးဖြစ်သော အောင်ဆန်းသူရိယ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို အပ်နှင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုအားလည်း နိုင်ငံသားကဒ်ပြား အမြန်ဆုံး ထုတ်ပေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။